Atsaharo ny fanoratana ho an'ny milina fikarohana | Martech Zone
Alarobia, Martsa 21, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny maodeliko WordPress dia novolavolaina ho an'ny Search Engine. Nandrafitra tsara ny modely nomeko aho rehefa nahalala torohevitra vitsivitsy tamin'ny olona vitsivitsy. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny lohatenin'ny pejy ka hatramin'ny tag dia nasiany tweak mba hanery araka izay azoko atao.
Ny fanatsarana ny modely bilaogiko dia saika ny 50% amin'ireo mpitsidika ahy dia tonga amin'ny alàlan'ny Search Engine, Google indrindra. Na dia nohamarinina ho an'ny Search Engine aza ny bilaogiko, SEO hanamarika ny manam-pahaizana fa tsy ny lahatsoratro.
Tsy averiko amin'ny lohateny vitsivitsy voalohany ny lohateniko. Tsy mampiasa rohy taonina ao amin'ny lahatsoratro aho. Tsy matetika aho no mampifandray amin'ireo lahatsoratro manokana raha tsy hoe tena havany izany. Rehefa namaky taonina SEO lahatsoratra, azoko atao ny manoratra lisitr'ireo zavatra izay aho tokony ataovy isaky ny lahatsoratra.
Tsy hanao izany aho satria tsy manoratra ho an'ny Search Engine, fa ho an'ny mpamaky. Toa tsy mahatoky fotsiny ny manova ny fomba fifampiresahako mba hahafahan'ny rindranasa rindrambaiko sasany amin'ny web crawler sasany misintona ny mombamomba ahy ary manondro ny lahatsoratro ho an'ny fikarohana teny lakile. Tsy raharahako raha mahita ahy mora kokoa ny motera fikarohana… Tsy tiako raha faly amin'ny mpamaky ny lahatsoratro bilaogy.
Hatramin'ny namakiako ireo lahatsoratra ireo nandritra ny fotoana kelikely, tena tsikaritro rehefa manao izany ireo bilaogera hafa. Teny fampitandremana fotsiny ho an'ireo bilaogera ireo - I mandingana ny famakiana betsaka ny hafatrao noho io. Indraindray dia najanoko mihitsy ny fisoratana anarana.
Fomba iray hafa hilazana amin'ireto bilaogera ireto ny fanehoan-kevitr'izy ireo… mazàna ianao mahita mpaneho hevitra isan-kerinandro mankany amin'ny bilaogin'izy ireo. Tsy misy resaka… hevitra fotsiny etsy sy eroa ary tsy miverina intsony ny mpamaky. Tena tiako ny mahita ireo olona ireo niverina tany amin'ny bilaogiko hatrany hatrany. Nanjary mpinamana be tamin'ny mpitsidika ahy aho - na dia mbola tsy nifankahita tamin'izy ireo manokana aza aho.
Ianareo izay manana fiaviana ara-barotra mivantana dia mahafantatra fa ny fikarohana amin'ny haino aman-jery rehetra dia milaza aminao fa sarotra kokoa ny mahazo mpamaky vaovao noho ny mitazona ireo efa misy. Paikady maharesy tena rehefa manoratra hananganana fametrahana Search Engine fa tsy mankafy na mifikitra amin'ny bilaoginao ny mpamaky anao. Tsy maintsy manatsara hatrany ianao ary manohy manamboatra mba hahazoana hitsika bebe kokoa amin'ny Search Engine.
Aza manoratra ho an'ny Search Engine. Manorata ho an'ny mpamakinao.
Mar 22, 2007 amin'ny 1: 02 AM
misaotra amin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana 🙂
indraindray amin'ny fiezahantsika fametrahana toa adinontsika fa tena misy mpamaky tokoa any.
Tsy mifandray matetika amin'ny lahatsiko manokana aho raha tsy hoe tena havanana.
Saika tsy mifandray amin'ny lahatsoratro manokana aho. Satria ny ankamaroan'ny fotoana dia toa tsy mifanara-dalana ny lahatsoratro. Matetika izy ireo dia momba ny lohahevitra amin'izao fotoana izao, tsy manana fifandraisana (na kely, raha misy) amin'ny lahatsoratra teo aloha.
Apr 2, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Nanomboka bilaogy aho ary nihevitra fa hanao izany indrindra aho, hanoratra mba hahazoana laharan'ny pejy sy ny toy izany, dia rehefa nanomboka nanoratra aho dia toa tsy izaho ilay izy…Satria tsy izany! Nolazaiko avy eo fa raha hanao izany aho dia ho araka ny fepetrako fa tsy misy hafa. Vao iray volana aho no nitoraka bilaogy ary tiako ilay hoe manorina fifandraisana aho fa tsy rohy!
Apr 2, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Misaotra, Latimer! Vao avy tao amin'ny blôginao aho (heveriko fa manana namana mitovy isika - JD avy amin'ny Mainty amin'ny orinasa. Ny blôginao dia nosoratana tamim-pitandremana tsara… mikasika lohahevitra tena mipoaka ianao, saingy manome am-panajana ny lafiny hevitrao ianao ary mamela ny lohahevitra hisokatra ho an'ny fifanakalozan-kevitra.
Namaky lahatsoratra be dia be tao amin'ny tontolon'ny bilaogy momba ny zavatra ataonao aho tokony atao… ary heveriko fa ny ankamaroany dia BS Toy ny fitantarana amin'olona ny fomba fanaony tokony miresaha amin'ny olon-tsy fantatra.
Misaotra nitsidika sy naneho hevitra!
Apr 2, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Misaotra noho ny nijanonan'i Doug, araka ny lazaiko ao amin'ny bilaogiko dia misokatra foana aho hihaino ny hevitra rehetra ary afaka manao fifanakalozan-kevitra manan-tsaina momba ny olana rehetra isika. Misaotra indray amin'ny fanehoan-kevitra.
Apr 3, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Te-hampahafantatra anao fotsiny aho fa tena nahafinaritra ahy ny voalazanao tamin'ity lahatsoratra ity. Vao nanomboka ny bilaogiko aho vao iray volana mahery lasa izay ary tsy mitsahatra mianatra ny fomba fanaovana an'io zavatra io aho, noho izany dia tena manampy tokoa ny torohevitrao satria marina izany. Na dia zara raha tao anatin'io iray minitra io aza aho, dia tsy maintsy niady tamin'ny fakam-panahy hanao izay rehetra azoko atao mba hampiakatra ny isa. Toy ny fiankinan-doha amin'ny crack na inona izany, fantatrao? MAMAKY ny mpamaky, tsy maintsy manana mpamaky bebe kokoa aho.
Fa izao aho namaky ny lahatsoratrao dia niverina tamiko daholo izany, toy ilay feo kely voahazona tao an-tsaiko. Ilay voasazy noho ny fahalalany. "Lazao izay fantatrao, lazao toy ny lazainao, dia ho avy izy ireo."
Miaraka amin'ny fialan-tsiny, mazava ho azy, amin'ny "Sahan'ny nofy".
Apr 3, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Misaotra, Keith. Heveriko fa ny olona rehetra (na any ivelan'ny bilaogy aza) dia mitady fankasitrahana. Manoratra ihany koa aho indraindray manontany tena hoe ahoana no fiantraikan'izany amin'ny SEO, rohy, diggs, sns. Ny iray amin'ireo antony nanoratako ity lahatsoratra ity dia ny hitazonana ny tenako milahatra koa!
Lahatsoratra tsara. Miezaka ny tsy hanoratra ho an'ny milina fikarohana aho, saingy tsy maintsy ekeko fa mieritreritra an'izany aho. Amin'ny lohatenin'ny lahatsoratro sasany (raha mifandraika amin'ny hetsika lehibe iray) dia lazaiko fa mba ho azon'ny milina fikarohana izy io. Tsy manao izany aho mba hahazoako mpitsidika marobe amin'ny tranokala (manana fomba hafa hamelomana ny ego aho). Manao izany aho satria tiako ho vakian'ny olona izay holazaiko. Antenaina fa hiverina izy ireo ary handray anjara amin'ny dinika. Mahafinaritra ny bilaogy. Afaka mihaona amin'ny olona mahay aho ary mianatra zavatra maro ao anatin'izany dingana izany.
Apr 3, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Mino izany na tsia, azonao atao ny manoratra ho an'ny milina fikarohana SY ny mpamaky anao.
Tiako ny mieritreritra ny roa / ary fa tsy ny iray / na.
Misy fahafahana azoko fanamby anao amin'ny fanolorana fihetsiketsehana toy izany? Tsy misalasala aho fa tsy azo atao izany – heveriko fa mety misy fomba hanaovana azy roa ireo. Na izany aza, tsy afaka mahita ohatra aho. (Angamba izany satria ny mpanoratra dia nanao asa tsara tamin'ny fampiasana ireo teknika roa ireo.)
Tiako ny mahita lahatsoratra kisendrasendra voasoratra tsara ary mampitaha izany amin'ny lahatsoratra iray nosoratana tsara ARY mampiasa teknika ho an'ny Search Engines.
Apr 4, 2007 amin'ny 7: 49 AM
Aho Doug -
Amin'ny loza mety ho firarian-tsoa ho an'ny tena, ity misy ampahany noforoniko izay mahazo fifamoivoizana amin'ny milina fikarohana ary iray izay nankafizin'ny mpamaky ahy tsy tapaka:
Fitsipika momba ny bracelet tsy misy fitarainana: mifikitra amin'izy ireo ve ianao?
Manana vitsivitsy toy izany aho - ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra!
Na dia miaiky aza aho fa fantatro ny tianao holazaina - indraindray aho dia mankasitraka kokoa ny SEO noho ny mpamaky tsy tapaka, fa faly aho fa mbola miverina foana ny mpamaky ahy satria tiany aho.
Toy ny hoe miaraka aho Ilker Yoldas' TheThinkingBlog.com: Tsy mitsahatra mamaky azy aho satria tiako izy, mba hahafahany manoratra SEO ary mbola ho eo foana aho amin'ny maha-mpamaky azy!
Tandremo ary misaotra namaly,
Apr 4, 2007 amin'ny 10: 10 AM
Misaotra, Paula. Antenaina fa raisinao araka ny tokony ho izy izany – saingy heveriko fa nanampy tamin'ny fanohanana ny hevitro ianao. Tsy mitombina ny filazanao ny “bracelet tsy misy fitarainana” imbetsaka ao amin'ireo andalana vitsivitsy voalohany – toa ny SEO no laharam-pahamehana fa tsy toy ny niresaka tamiko.
Tena tsara ilay lahatsoratra, azafady, aza mitondra ahy amin'ny lalana diso. Saingy ao anatin'ny 5 taona izay ahafahan'ny milina fikarohana manaparitaka angon-drakitra momba ny lohahevitra tsy mila manoratra ho azy ireo - ho fomba voajanahary hanoratana lahatsoratra ve izany?
Mampihomehy, nandeha tany aho ity lahatsoratra ity ao amin'ny Thinking Blog ary manana ny paragrafy voalohany 21 rohy maimaim-poana ao amin'ny rohy mankany amin'ny bilaoginy. Ireo rohy ireo dia natao ho an'ny motera fikarohana fotsiny fa tsy ho ahy sy ianao.
Amin’ny fanajana rehetra!
Apr 4, 2007 amin'ny 10: 14 AM
Tsy misy fandikan-dalàna noraisina; misaotra namaky ny lahatsoratro.
Ary eny, mazava ho azy fa tsy hanao izany aho avereno sy sahisahy ny fehezanteny SEO manan-danja raha tsy tiako ho hitan'ny olona izy ireo.
Indrisy, toy izany ny fiainan'ny SEO'er…
Manontany tena aho hoe ahoana no hiovan'ny lalao SEO-Google manontolo amin'ny ho avy.
Tokony ho fitetezam-paritra mahavariana izany…
Apr 4, 2007 amin'ny 10: 23 AM
oh! Double-whew! Misaotra Paula.
Janoary 23, 2008 amin'ny 4:20 PM
Vakio fotsiny ity lahatsoratra ity ary ahoana ny fotoana. Nandao fivoriana aho tamin'ny herinandro lasa izay namalian'ny mpiara-miasa iray tamin'ny teny filamatra fa tsy mahasarika mpamaky ny tranokalanay amin'ny filazana hoe “tsy natao ho an'ny mpamaky ireo pejy ireo. Ireo pejy ireo dia natao ho an'ny milina fikarohana”. Nahatonga ahy hikorontana ny lohako fa lasa lavitra loatra ny lalan'ny optimization izahay ka tena TIA ny olona tsy ho vakian'ny olona ny pejy. Mitsoka ny saiko. Optimize araka izay azonao atao raha toa ka hevitra vahiny ny famoronana votoaty fampahafantarana. Tsy ilaina ny milaza fa nandefa ity lahatsoratra ity tamin'ny olona vitsivitsy tao amin'ny orinasako aho.